Bible Mu Nsɛm Mose ne Aaron Hu Farao - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
BERE a Mose san kɔɔ Misraim no, ɔkaa anwonwade no nyinaa ho asɛm kyerɛɛ ne nua Aaron. Na bere a Mose ne Aaron yɛɛ anwonwade yi kyerɛɛ Israelfo no, wɔn nyinaa gye dii sɛ Yehowa ka wɔn ho.
Afei Mose ne Aaron kohuu Farao. Wɔka kyerɛɛ no sɛ: ‘Yehowa, Israel Nyankopɔn no se, “Ma me nkurɔfo nkɔ nnansa kwan, na wɔnkɔsom me sare so.”’ Nanso Farao buae sɛ: ‘Minnye Yehowa nni. Na meremma Israel nkɔ.’
Farao bo fuwii, esiane sɛ na nkurɔfo no pɛ sɛ wogyae adwuma a wɔreyɛ no kɔsom Yehowa nti. Enti ɔhyɛɛ wɔn ma wɔyɛɛ adwuma kɛse mpo. Israelfo no kae sɛ Mose na wama aba saa, na Mose werɛ howee. Nanso Yehowa kae sɛ ɔmmma ɛnnhaw no. Yehowa kae sɛ: ‘Mɛma Farao agyaa me nkurɔfo ma wɔakɔ.’
Mose ne Aaron kohuu Farao bio. Saa bere yi de wɔyɛɛ anwonwade. Aaron de ne poma no too fam, na ɛdan ɔwɔ kɛse bi. Na Farao nkonyaayifo no nso de wɔn mpoma totoo fam, na ɛdan awɔ. Nanso hwɛ, Aaron wɔ no rememene nkonyaayifo no awɔ no. Nso na Farao remma Israelfo nkɔ ara.
Enti bere dui sɛ Yehowa kyerɛ Farao nyansa. Wunim nea ɔyɛe? Ɔde ahaw 10 a emu yɛ den baa Misraim so.
Ahaw ahorow no pii akyi no, Farao soma na wɔkɔfrɛɛ Mose, na ɔkae sɛ: ‘Ma ɔhaw no nnyae, na mɛma Israel akɔ.’ Nanso sɛ ɔhaw no gyae pɛ a na Farao asakra n’adwene. Ɔremma Israel nkɔ. Enti awiei no, ɔhaw a ɛto so 10 no bae, na Farao maa Israelfo no kɔe.
Wunim ahaw 10 no mu biara? Ma yensua eyinom.
Anwonwade a Mose ne Aaron yɛe no kaa Israelfo no dɛn?
Asɛm bɛn na Mose ne Aaron ka kyerɛɛ Farao, na mmuae bɛn na Farao de maa wɔn?
Sɛ wohwɛ mfonini no a, bere a Aaron de ne poma no too fam no, dɛn na esii?
Ɔkwan bɛn so na Yehowa kyerɛɛ Farao nyansa, na Farao yɛɛ dɛn wɔ ho?
Ɔhaw a ɛto so du no akyi no dɛn na ɛbae?
Kenkan Exodus 4:27-31 ne 5:1-23.
Bere a Farao kae sɛ: “Minnim Yehowa” no, na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ dɛn? (Ex. 5:2, NW; 1 Sam. 2:12; Rom. 1:21)
Kenkan Exodus 6:1-13, 26-30.
Hu a Yehowa kae sɛ wamma Abraham, Isak, ne Yakob anhu no no kyerɛ dɛn? (Ex. 3:13, 14; 6:3; Gen. 12:8)
Yɛte nka dɛn wɔ dwuma a Yehowa kɔɔ so de Mose dii no ho, ɛwom mpo sɛ Mose tee nka sɛ ɔmfata adwuma a wɔde ahyɛ ne nsa no? (Ex. 6:12, 30; Luka 21:13-15)
Kenkan Exodus 7:1-13.
Bere a Mose ne Aaron de akokoduru kaa Yehowa atemmusɛm kyerɛɛ Farao no, ɔkwan bɛn so na wɔyɛɛ nhwɛsode maa Onyankopɔn asomfo nnɛ? (Ex. 7:2, 3, 6; Aso. 4:29-31)
Ɔkwan bɛn so na Yehowa kyerɛe sɛ ɔkorɔn koraa sen Misraim anyame no? (Ex. 7:12; 1 Be. 29:12)
BIBLE MU NSƐM A WƆAYƐ HO MFONINI
Onyankopɔn Somaa Mose Kɔɔ Egypt
Adɛn nti na Farao antie Mose ne Aaron? Ɔhaw bɛn na Farao asoɔden no de baa ɔne ne manfo so?